Ny tanjaky ny fifanarahana, vondrona milina fandavahana Rotary XCMG napetraka ao atsimo!
Tena tsara ho an'ny fiveloman'ny olona ny tetikasa. Ny isan'ny tetikasa fananganana antontam-bato dia 3.600, ary ny savaivony dia 600mm, 800mm, ary 900mm ny savaivony. 25m ny salan'isan'ny antontam-bato, ary lehibe ny haben'ny fananganana. Na izany aza, ny fiovan'ny tany karst any an-toerana no iharan'ny lozam-pifamoivoizana toy ny fianjerana ...Hamaky bebe kokoa »
XCMG dia mampiroborobo ny "fanitarana" ny angovo geothermal amin'ny ezaka "carbon carbon"!
Hatramin'ny fiandohan'ity taona ity, ny tanjona «3060 ″ dia efa voalaza matetika, ary ny tanjona« karbonina roa »dia novaina ho paikadim-pirenena. Ny faritra rehetra dia ezahina ho lasa lohan'ny revolisiona angovo ary hanafainganana ny fanitsiana ny firafitry ny angovo ...Hamaky bebe kokoa »
Fiampitana XZ6600 HDD Beijing-Hangzhou Grand Canal
XCMG boribory misy torolàlana XZ6600 miampita ny tetikasa Canal-Hangzhou Canal dia manampy ny fampidirana rano ao amin'ny tanànan'i Pizhou. Amin'ny alàlan'ny fiampitana ny rignika fandavahana torolàlana XCMG, ny faritra avaratra sy atsimo amin'ny lakandrano dia mifandray mba hiantohana ny fiarovana ny rano ...Hamaky bebe kokoa »
Rig fandavahana rano amin'ny rano
Ny fitrandrahana angovo dia manampy amin'ny tsy fitongilanana karbonika Tao anatin'ny taona vitsivitsy, ho setrin'ny politika nasionaly momba ny fampandrosoana angovo madio ary hampiroborobo ny fampandrosoana sy ny fampiasana angovo geothermal an'ny fireneko, ny XCMG Foundation dia nanangana fandrosoana amin'ny sehatry ny fandavahana angovo sy ny famokarana angovo. Ny XCMG ...Hamaky bebe kokoa »
Ny tetikasa fantsona gazy voajanahary China China Atsinanana dia manomboka amin'ny sisin-tanin'i Sino Russia any Heihe City, faritanin'i Heilongjiang.
Fotoana fandefasana: Jun-01-2021
Ny tetikasa Sino-Rosiana Atsinanana Route Natural Gas Pipeline dia manomboka amin'ny sisintany Sino-Rosiana ao Heihe City, Faritanin'i Heilongjiang ary mifarana any Shanghai. 5111 kilometatra ny halavany. Mizara telo izy io ho fankatoavana sy fananganana amin'ny dingana. Anisan’ireny ny faritra avaratra sy ny t ...Hamaky bebe kokoa »
XSL20 / 1000 dia nandoaka rano mafana 1680 metatra hanampiana ny indostria Yifang
Reko fa nisy olona avy amin'ny Oniversiten'i Taiwan nanome rano loharano mafana taminay… ”Vao tsy ela izay, ny rigs fandavahana fantsakana XCMG dia nandavaka rano loharano mafana tany ambanin'ny tany tao amin'ny Tanànan'i Xinquan, Jiangxi. Marina tokoa! Ny loharano mafana dia nomena ny toeran'ny "aristocrat anaty rano" noho io ...Hamaky bebe kokoa »
Mijanona sy miaro an'ity "kilometatra farany" ity izahay!
Any Indonezia, firenena iray fantatra amin'ny anarana hoe "firenena misy nosy iray alina", rig fandavahana fihodinana XCMG, rig ary atsofohy ary ny vokatra hafa no manana ny tsena avo indrindra amin'ny tsena eo an-toerana, saingy miparitaka amina nosy 10 izy ireo. Toerana fanamboarana ivelany no m ...Hamaky bebe kokoa »
Ny rig fandavahana XCMG 1000th mitsivalana dia nanakodia ny tsipika fivorian'ny taona 2019 sy ny lanonam-panokafana faobe ny rigy fandavahana torolàlana marobe taonina
Fotoana fandefasana: Apr-10-2021
Ny lanonam-panokafana ny rig fandavahana torolàlana marindrano XCMG 1 000 amin'ny taona 2019 sy ny fandefasana faobe ny rigs fandavahana torolàlana marobe taonina dia natao tao amin'ny XCMG Foundation! Eo amin'ny sehatry ny milina tsy misy trench, namela stroke mahery sy mareva-doko izy! Folo taona niasa mafy ...Hamaky bebe kokoa »
XCMG, namoaka ny filaharana indray!
Vao tsy ela akory izay, nanjary nalaza ireo "paositry ny maherifo" miampita ny faribolana, na izany aza, noho ny halavany sy ny fahasarotan'ny fananganana azy, maro amin'ireo mpilalao indostrialy Trenchless no mijanona lavitra Mampiasà hery ho "vato fiakarana" Ny "vato fiakarana" amin'ity tetik'asa mega ity dia ny. ..Hamaky bebe kokoa »
Ny rigy fandavahana torolàlana XCMG XZ3600 dia lasa "manam-pahaizana" amin'ny fiampitana ambanin'ny tany indray
Rehefa avy namakivaky jeografia mahery vaika 135MPa ny boribory fandavahana lalana XCMG XZ3600, izay manam-pahaizana manokana amin'ny "taolana mafy", dia lasa "manam-pahaizana" amin'ny fiampitana ambanin'ny tany Vao tsy ela akory izay, ilay maodely mipoaka be zatra XZ3600 an'ny XCMG mitodika any. ..Hamaky bebe kokoa »
Dth Rig Machine, rig fandavahana antontany, Milina fandavahana rano kely, milina fandavahana lavaka,